Eco တာအမျိုးသမီးစာမျက်နှာ 4
Fish ငါး Solyanka - တစ်စာရွက်
မ Solyanka - တစ်လူကြိုက်များစဉ်အလာရိုးရာရုရှားအစားအစာ - အမျိုးမျိုးသောအစိတ်အပိုင်းများအပြင်အတူစောက်ဟင်းရည်ကိုအပေါ်ချက်ပြုတ်ကြွယ်ဝစပ်ဟင်းချိုအဆာအမျိုးအစား, များသောအားဖြင့်ငါး, အသားနဲ့အမဲသားထုတ်ကုန်များ, ချဉ်သို့မဟုတ် Marine မှို, ချဉ်သခွားသီး, capers, သံလွင်, သံပုရာဖြစ်ပါသည် နှင့်အခြားသူများ။ ခြောက်သွေ့ဆူးပင်၏ပြင်ဆင်မှုခုနှစ်တွင်လည်းပူပြင်းနံ့သာမျိုး, ကြက်သွန်နီ, မုန်လာဥနီ, ကြက်သွန်ဖြူ, မွှေးကြိုင်အမြစ်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက် (စသည်တို့ကိုဇီယာစေ့, parsley,) ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ မဟင်းချိုများအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများအမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ (ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူသို့မဟုတ်ဟင်းချို) ဟင်းချို, အသား, မှိုနှင့်ငါး ငါးကိုဟင်းချိုအသင်းများကုန်ကြမ်း ထား.
မ beet - တစ်ဦးအလွန်အသုံးဝင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်လူသားများနှင့်ဗီတာမင်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရကြွယ်ဝသော။ ကနေသင်ကွဲပြားခြားနားသောဟင်းလျာများအများကြီးလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ braised beets အလုပ်ပုံကို, သင်မှာကြည့်ရှုကြပါစို့။ beet ပန်းသီး အတူ braised ကိုပါဝင်ပစ္စည်းများ: beet - 600 ဂရမ်;
သူ၏ "အာဆင်နယ်" တွင်နေထိုင်တော်မူရာအရပ်ဖြစ်သင့်အဘယ်သို့သောအကြောင်းစိတ်ကူးများအစုတခုရှိပါတယ်တဲ့သူ မည်သူမဆို။ သိပ်ကိုမကြာခဏအသစ်တစ်ခုကိုအိမ်ပြန်ရိုက်, တသေးထေိုတိုက်ခန်းတစ်ခန်းထဲမှာစိုးစံကြပြီမဟုတ်ဘယ်နှစျသိမျ့နှင့်နွေးထွေးမှုအံ့ဘွယ်သောအမှုကြောင်းသဘောတူသည်။ တစ်ခါတစ်ရံအအပြန်အလှန်: လူတွေကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအဘို့အိမ်တော်၌အသက်ရှင်လျက်, တစ်နည်းနည်းနဲ့အပြည့်အဝထင်းမခံစားချက်။ အမှန်မှာအတွင်းပိုင်းအတွက်မှန်ကန်သောအရောင်အဆင်းအခြေခံကျကျဆိုအခန်းခကိုပြောင်းလဲနှင့်အပြည့်အဝပိုင်ရှင်များ၏စိတ်ဓါတ်များထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဖန်စီ၏နောက်ထပ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုကြင်နာကြောင်း။ အတွင်းပိုင်းထဲမှာအရောင် ရွေးချယ်ရေး တကယ်တော့ဒီတစ်ခုခုကိုအလွန်အလေးလေးနက်နက်ဖြစ်သင့်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝုဏ်၏မှတ်ပုံတင်ရေးအပ်နှံရန်ဟူသောဖို့ရန်အလွန်တာဝန်ရှိသည်သိမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးမဖြစ်မနေအခြေခံပေါ်မှာ, သူတို့ကိုယ်တိုင်ကရွေးချယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဇိုင်နာကကမ်းလှမ်းအရောင်အစီအစဉ်အီဖြစ်ပေါ်စေသို့မဟုတျအခွားနညျးလမျး "လမ်းပိုင်း" မြို့သားတို့၌မသငျ့သ​​ညျ။ အခန်းထဲမှာအတွက်နေထိုင်သည့်သဟဇာတလမ်းညှိညျခှနျအားနှင့်အတွင်းပိုင်းတွင်အရောင် zhizni.
ဒါဟာသင်ရုံသင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်9လအတွင်းအဖြစ်ပြန်ကြည့်ဖို့အချိန်မရှိဘူးကြောင်းလေ့လာသိရှိအားလုံးမျှော်လင့်ချက်တွေရှိသှားပွီပုံရပြီးသားကြီးထွားလာအစအန။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်တဖန်ငါသူတို့အားမမေ့နိုင်သောအချိန်လေးခံစားရရန်ချင်တယ်!
လူတိုင်းအတွက်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလစတင်ခြင်းနှင့်အတူနွေးထွေးသောနံရံနှင့်အတူတစ်ဦးသောသိုးမွေးဆွယ်တာအင်္ကျီ၌ထ bundle ဖို့ဆန္ဒ, ဘောင်းဘီသို့မဟုတ်ဂျင်းဘောင်းဘီနှိုး။ ထိုသို့နွေဦးတိုင်အောင်, လက်ရာမြောက်သောဆင်မြန်းမေ့, ပုံသဏ္ဌာန်မရှိသောအဝတ်အစားတွေအတွက်နေရာယူကြမည်ပုံရသည်။ သို့သော်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ်, နှင့်ဣတ္ကြည့်ဖို့လိုရှိသမျှသောဖက်ရှင်ပင်ချမ်းသောကာလ၌ဆောင်းကာလကိုအဘို့အဖုံးအုပျစားဆင်ယင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ စကားစုများဆောင်းရာသီကိုဖုံးအုပျဆင်မြန်း အားလုံးကြင်နာဆင်မြန်းကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ method ကိုပေါ် မူတည်.
မီးဖိုချောင်ထဲမှာ Stretch မျက်နှာကြက်
မီးဖိုချောင် - တိုက်ခန်းများ၏ပိုင်ရှင်များပေမယ့်ဧည့်သည်များနှင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများသာရှိပါသည်နေရာ။ လူတွေဟာမကြာခဏအစားအစာနှင့်အချိန်အပိုက​​်ဆံအဆင့်မြှင့်တွေအများကြီးဖြုန်းဒါကြောင့်ဒီခန်းထဲမှာ repair, အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်စတိုင်နှင့်အတူစေရပါမည်။ မျက်နှာကျက်၏ပြုပြင်မှုအတွက်အထူးအခန်းကဏ္ဍမှာတပ်ဆင်ခဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဇိုင်းချက်ပြုတ်အခြေအနေများ, စိုထိုင်းဆနှင့်အပူချိန်ဟာအစွန်းပုံမှန်အားဖြင့်သယ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဆန်းသစ်သောအိုင်ဒီယာကိုအောင်မြင်စွာဤအခြေအနေများအပေါငျးတို့သဆောင်တတ်၏ရသောမီးဖိုချောင်ထဲမှာရပ်ဆိုင်းထားမျက်နှာကြက်ဖြစ်လာသည်။ ကိုဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက်မီးဖိုချောင်ရဲ့ style သို့ဿုံကိုက်ညီပါကရှုပ်ထွေးသောနှစ်ဦး-Level ဒီဇိုင်းများအတွက်သုံးနိုင်တယ်, ဒါကြောင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့်နှောင့်ရှက် pi စစ်ဆင်ရေးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးလွယ်ကူပါတယ်။ ကိုဆိုင်းငံ့မျက်နှာကျက် ၏ဂုဏ်သတ္တိများ ဒါကဒီဇိုင်းကိုမျက်နှာကျက်ဝယ်ယူတဲ့အခါထောက်ပံ့ခြင်းကိုခံရမည်ကိုသိရအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်လမ်းပိုင်းမျက်နှာကြက်၏အကောင်းအဆိုး: PVC ရုပ်ရှင်အတော်လေးအားကြီးသော;